RW C/weli “Heshiiskii maamul sameynta gobolada dhexe saameyn ku yeelan maayo degaanada Puntland”
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaaalka Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa ka qeybgalay kulan uu soo abaabulay Machadka Cilmi Baarista (The Heritage), isagoo ka jawaabayey su’aalihii ay weydiinayeen ka soo qeybgalayaashii kulanka iyo weliba Qurbo-joogta Soomaaliyeed oo si toos ah internetka ugala socday barnaamijka.
Kulankan ayaa waxaa ka soo qeybgalay Bulshada Rayidka, Aqoonyahano, Oday dhaqameedyo, Haween iyo Siyaasiyiin horay xilal uga soo qabtay dalka.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa marka hore ka warbixiyey xaaladda amniga, horumarka la sameeyey iyo caqabadaha jira. Sidoo kale waxuu ka hadlay waxqabadka Xukuumadda dhanka amniga, isku-xirka maamullada dalka iyo Dowladda Federaalka ah, maamul wanaaga, iyo la dagaallanka musuq-maasuqa.
Ra’iiul Wasaaraha ayaa la weydiiyey qaabka loo hirgalin karo nidaamka federaalka iyo heshiiskii u dambeeyey ee maamulka loogu dhisayo gobolada dhexe iyo walaaca ay Puntland ka qabto heshiiskaas.
“Sida aad ogtihiin gobollada dhexe waxaa ka jiray maamullo yar-yar oo aysan ka dhaxayn wada shaqayn, waxaana xukuumaddu samaysay guddi golaha wasiirrada ka tirsan oo wada xaajood la fura dhinacyadaas si loo mideeyo maamullada gobollada dhexe ka jira, waxaana rajo fiican ka qabnaa in dadka deegaanadaas dagan loo sameeyo maamul ay ku midaysan yihiin. Heshiiskii maamul u samaynta gobollada dhexe ee Soomaaliya maahan mid wax u dhimaya maamulka Puntland oo walaac ka muujiyey heshiiskaas, waxaana si cad u qeexay Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud in heshiisku uu san wax u dhimayn deegaanada Puntland ay maamusho" ayuu yiri RW Cabdiwali
Ra’iiusl Wasaaraha oo ka jawaabayey su’aal ku saabsanayd arrimaha nabad galyada ayaa si qoto dheer uga hadlay talaabooyinka xukuumadu ku taalabsatay.
“Guulo waaweyn oo wax ku ool ah ayaa laga soo hooyey nabad galyada, waxaa gacanta lagu soo dhigay dhagar qabayaal ka tirsan kooxaha nabad diidka ah, oo qaarkood sharciga la horkeenay, lana marsiiyey wixii ay mudnaayeen, Waxaa sidoo kale laga hortagay qaraxyo iyo kooxo isku xiran oo doonayey in amniga khal-khal galiyaan, waxaa habeen ka hor gacanta lagu soo dhigay hub aad u faro badan oo isugu jira noocyo kala duwan oo halis ku ahaa amniga dalka. Waxaa ciidanka qaybihiisa kala duwan ku shaqeeyaan duruuffo adag, taas oo runtii aysan jirin ciidan ku shaqeeya caalamka, dadka Soomaaliyeed waxaa looga fadhiyaa in ay taageero dhaqaale iyo mid niyadeed u fidiyaan ciidanka qaranka, kuna amaanaan howlaha adag oo ay wajahayaan, Ra’iisul Wasaaraha ayaa xasuusiyey dadka Soomaaliyeed in ay u istaagaan sidii ay taageero dhan kasta ah ugu fidin lahaayeen Ciidamada u taagan ilaalinta shacabka iyo sharafta qaranka”
Ra’iisul Wasaaraha oo ka jawabaayey su’aal ku saabsan musuq-maasuqa ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay ku howlantahay dhisidda hay’adda la dagaallanka musuq-maasuqa.
“Shaki kuma jiro inuu jiro musuq-maasuq, kaas oo layska dhaxlay mudooyinkii lagu jiray KMG, hadana uu wali sii socda, waxaase mudan in lagu ammaano Xukuumadda tallaaboyinka wanaagsan oo dib-u-habaynta loogu samaynayo nidaamka maaliyaydeed ee dowaldda, kaas oo runtii si wanaagsan u shaqeeya. Waxaa xukuumaddu magacowday Xisaabiyaha guud iyo Hanti Dhowrka Guud ee Qaranka, wuxuuna wadaa qorshayaal uu kula xisaabtamayo hay’adaha dowladda, waxaa goluhu siiyeen madax banaani buuxdo oo ku baari karo cid kasta. Waxaan ka soo qayb galayaasha kulankaan ka codsanayaa in ay gacan ka siiyaan xukuumadda sidii loo dhisi lahaa Hay’adda la dagaallanka Musuq-maasuqa oo dhawaan la hirgelin doono, cid walba oo aqoon u leh dabagalka musuq-maasuqa iyo dowladd wanaaga waan ku soo dhaweynayaa in ay gacan ka geysataan dhisidda Hay’addan cusub” ayuu yiri RW Cabdiwali.
Mar uu ka jawaabayey su’aal la xariirta maamul-u-samaynta gobollada ayuu Ra’iisul Wasaaruhu si qoto dheer uga hadlay in xukuumaddu aysan dadka dusha uga keenayn maamul u samynta gobollada balse dowladda doorkeedu yahay in ay u fududayso.
“Siyaasada Xukuumadda ka mid mahaan in ay samayso maamulo uu san shacabku raali ka ahayn. Diyaarinta iyo shirarka lagu yagleelay maamulka koonfur galbeed waa mid ka horeeyey xukuumadaan, waxaana in mudo ah ka taagnaa is qab qabsi qaabka loo dhisayo maamulka koonfur galbeed. Waxayna xukuumaddu ka dhex samaysay dhinacyadii kala sheeganayey labada maamul dib u heshiisiin loo dhan yahay oo horseed u noqonaysa in la dhiso hal maamul oo ka kooban sadex gobol, waxaana ku amaanayaa dhinacyadii heshiiska gaaray sida ay dhab uga tahay hirgalinta heshiiskooda, iyagoona si wada jir ah ugu safraya magaalada Baydhabo si ay u dhamaystiran qaybaha ugu muhiimsan heshiiska” ayuu yiri RW Cabdiwali.
Ugu danbayntii Ra’iisul Wasaaraha ayaa u mahadceliyey ka soo qeybgalayaashii kulanka, waxaana uu tilmaamay in la sii joogteeyo doodaha noocan oo kale ah oo madaxda iyo shacabku isku wareysanayaan, waxuuna sheegay inay dhammaan tallooyinkii loo soo jeediyey xukuumadda ay ahaayeen kuwo muhiim u ah qaranka soomaaliyeed. Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in kulamadaan oo kale oo Xukuumadda iyo shacabka isla xisaabtamayaan la joogteyn doono